Ivo vanowana kutambura muGStreamer | Linux Vakapindwa muropa
Kazhinji vese vashandisi veGnu / Linux nevaparidzi vanogara vachidaro Linux ndicho chinhu chakachengeteka chiripo, yakachengeteka zvakanyanya kupfuura Windows, kwete chete nekuti haina mavhairasi kana malware asiwo nekuda kwehutongi hwayo uye mashandiro ayo anoita kuti zvive zvakaoma kushandisa.
Izvi ichokwadi asi ichokwadiwo kuti Gnu / Linux iri kushandiswa zvakanyanya uye izvo zvinoita kuti mamwe matambudziko nekushupika kuonekwe.
Nyanzvi yekuchengetedza yawana kunetsekana muna Gstreamer, chishandiso chatinowana mune akawanda kana asiri angangoita ese ekuparadzaniswa kweGnu / Linux. Izvi zvinoita kuti ive nyaya hombe yekuchengetedza sezvo nyaya iyi ichikonzera ngatirege kurasikirwa nehurongwa hwekushandisa nekuda kwekushandisa uku.
Gstreamer inopa kushupika asi ichakurumidza kugadziriswa neNharaunda
Nyanzvi yakawana izvi inonzi Chris Evans uye anga achingoda chete chishandiso chinonzi chisina chinyorwa uye timu ine Fedora kushandisa izvi kusagadzikana, kunyangwe hazvo GStreamer iripo mune angangoita ese maGnu / Linux kugovera.
Chokwadi dambudziko iri inogadziriswa neyakagadziridzwa munguva pfupi asi chokwadi ndechekuti izvi zvinoratidzira zvakare matambudziko anoonekwa mukuparadzaniswa kweGnu / Linux. Kana chiri chokwadi kuti kune izvi unofanirwa kuve nyanzvi kana mushandisi wepamberi muGnu / Linux asi kune vanhu vazhinji uye vane ruzivo urwu mukati meiyo penguin inoshanda sisitimu.
Iko kusava nechokwadi kuri kuwedzera nekuwedzera asi ichokwadi kuti parizvino mhinduro kubva kune vanogadzira zvekugovera iri kukurumidza kupfuura idzo dzinowanikwa mune mamwe masisitimu anoshanda seWindows kana Mac OS, zvinoreva kuti kunyangwe hazvo Linux isinganyatso chengeteka, inoshanda zvakare mumhinduro dzayo uye mukupindura nyaya dzekuchengetedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ivo vanowana kutambura muGStreamer
Chinhu chakanaka ndechekuti kuva gnu linux software yemahara, kushomeka kunogona kuonekwa nekugadziriswa, mune software yevaridzi ndivo varidzi vechirongwa vanoziva izvo zvinokundikana, imwe nguva mumwe munhu anowana chimwe chinhu asi zvinongogara zviri varidzi ve chirongwa vanoita zvavanoda nenjodzi isu tisingazive nezvazvo.
Urikuti kudii? Unoziva here kuti chii chinonzi gstreamer? Gstreamer iripo muLinux, Windows, OS X ... Iyo iplatifomu fomati ine budiriro yakazvimirira yeLinux. Zvinoita sekunge iwe wakandiudza kuti vakawana kusagadzikana muFirefox uye vakapomera Linux nekuti yakavhurwa sosi. Hapana murume kwete. Iyo njodzi iri muGstreamer uye inoshandiswa neese masisitimu anoshanda. Nekutevera mutemo wako wevatatu maWindows zvakare ari panjodzi, kunyangwe iyi isiri nhau.
Ini ndinobvumirana nezvakataurwa naFernand, chirongwa hachiite iyo yekushandisa system. Zvisinei, zvinofanirwa kuonekwa kuti rudzi urwu rwechirevo ruri kuunzwa nekutaura kuti GNU / Linux iri panjodzi ...
Antonio Capel akadaro
Ini ndinoburitsa murume uyu achiti GNU linux haina kuchengetedzeka.
Ngatione kuti mangani machenjedzo ezvinetso zvekuchengetedza zvaunoona pamberi pewindows nevamwe uye zvinonyanya kukosha pavanobuda, zvinotora nguva yakareba sei kugadzirisa dambudziko zvichienzaniswa nemamwe ese akavanzika OS.
Zvinotaridza kwandiri zvakanaka kwazvo kuti iwe unovenga Linux uye kuti iwe unotora mukana padiki padiki dambudziko rinogona kubuda kuti urikande pasi. Asi funga nezvechinhu chakashata kwazvo icho chisingazove kana Linux ikakwanisa 99,9% yeavo vanonyanya kutamba pasi.
Pindura kuna Antonio Capel
NAS4Free 11: Yako Yakavhurika Sosi Kuchengetedza NAS